Shiinaha dhididka dharka gashaanta dharka jumlada dharka lagu iibsado ee shakhsiyaadka la iibsan karo karo iyo soosaarayaasha | Himilada
dhidid dhuumaha dharka jumlada ah ee dharka jumlada loo yaqaan 'personnalisable pullover hoodie'
50% cudbi, 50% Polyester
Jeebka jeebka Kangaroo
Dabool laba jibbaaran
Diiran oo moodada ah
Hoodie noocan oo kale ah oo miyir qabta waxay isticmaashaa qalab dhogor raaxo leh si ay u abuurto dhar isku dhafan oo dhexdhexaad ah. Iyada oo leh cabbirro kala duwan, waa ciyaar ku habboon kooxaha waaweyn ee doonaya inay yareeyaan daabacaadda cagaha deegaanka.
Carruurta shaqsi ahaan u daabacaadda hoodie, nashqadee hooyooyin kuu gaar ah oo leh qoraal, sawirro ama nashqadeena caadiga ah. In ka badan 30 midab oo kayd ah oo la heli karo. Dhaqsi dhakhso leh, daabacaad tayo leh oo loogu talagalay hadiyado shakhsiyeed
Hore: jimicsiga jimicsiga jimicsiga daabacaadda daabacaadda microfiber marathon isboorti golf shakhsi ahaaneed oo socodsiiya shukumaan
Xiga: caadooyinka carruurta tayada leh dharka shaati-gacmeedka dharka suufka ah
Tayada Sare ee Xakamaynta Hoodie
Pullover Hoodie daabac